Fanafihana mpampihorohoro silamo amin'ny toerana enina any Viena | Apg29
Betsaka ireo maty sy naratra no voalaza fa maty. Ny iray amin'ireo mpampihorohoro dia nanapoaka baomba namono tena koa.
Amin'ity horonantsary ity dia misy mpamono iray hita mitifitra.
Tsy vao andro vitsy lasa izay, nisy fanafihana mpampihorohoro silamo nahatsiravina nitranga tao amin'ny fiangonana katolika iray tany Nice .
Tao Avignon, 250 km miala an'i Nice, nisy silamo maty maty voatifitra taorian'ny fanafihana antsy tamina polisy maromaro.
Fanafihana mpampihorohoro silamo ao Wina
Androany, mbola nisy ny fanafihana mpampihorohoro silamo . Any Wina izao amin'ny toerana enina. Betsaka ireo maty sy naratra no voalaza fa maty.
Polisy iray niaro sinagoga tao an-tanàna no voatifitra ary naratra nandratra ny ainy. Ny mpanao ratsy iray dia tsy maintsy maty ary ny iray kosa tokony handositra. Ny iray amin'ireo mpampihorohoro dia nanapoaka baomba namono tena koa.
Mitohy ny fanafihana amin'ny fotoana anoratana. Maromaro no maty. Betsaka no maratra mafy ary maro no mahazo fitsaboana ao amin'ny hopitaly .
Voasokajy ho fanafihana mpampihorohoro ity fanafihana ity ary inoana fa novonoin'ny mpamono olona maro.
Jesosy irery no mahavonjy sy manafaka
Rehefa nitranga ny fanafihana mpampihorohoro tany Nice sy Avignon dia nanoratra aho:
Tena mila an'i Jesosy Kristy ao amin'ny Baiboly ny olona. Avy eo dia hatsahatra ny fankahalana, famonoana olona ary herisetra. Jesosy irery ihany no mahavonjy sy mamonjy ary mamela ny heloky ny olona!
Lazaiko io fanambarana io anio ihany koa.